Rakhiis ah Warshad Mashiinka Bacriminta Laba Jeeris ah ee Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad Halsan | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Wareejinta Labaad ee Ku Marooji?
Jiilka cusub ee Mashiinka Double Turning Composting Turner wanaajiyay dhaqdhaqaaqa wareegga laba-geesoodka wareegga wareegga, sidaas darteed waxay leedahay hawsha leexashada, isku-darka iyo oksijiinta, hagaajinta heerka halsano, si dhakhso ah u jajaban, ka hortagga sameynta urta, badbaadinta isticmaalka tamarta ee buuxinta oksijiinta, iyo gaabinta waqtiga halsano. Qoto dheerida leexashada ee qalabkani wuxuu gaari karaa ilaa 1.7 mitir, taakulada wax ku oolka ah ee waxtarka lehna waxay gaari kartaa 6-11 mitir.
Codsiga Mashiinka Labaad ee Kuleylinta Composting Turner
(1) Mashiinka Double Turning Composting Turner waxaa si weyn loogu adeegsadaa halsano iyo howlaha ka saarida biyaha sida dhirta bacriminta dabiiciga ah, dhirta bacriminta isku dhafka ah,
(2) Gaar ahaan ku habboon halsano ka mid ah walxaha dabiiciga ah sida dhoobada iyo qashinka degmada (maadama ay ku yar tahay maadada dabiiciga ah, qoto dheer halsano waa in la siiyaa si loo hagaajiyo heerkulka halsano, sidaas awgeedna yareyneyso waqtiga halsano).
(3) Samee xiriir ku filan oo u dhexeeya walxaha iyo oksijiinta hawada ku jirta, si aad uga ciyaartid doorka muhiimka ah halsaneynta aerobic.
Xakamee Qodobbada Muhiimka ah ee Naas-nuujinta
1. Regulation of carbon-nitrogen ratio (C / N). C / N ku habboon kala-goynta walxaha dabiiciga ah ee noolaha guud wuxuu ku saabsan yahay 25: 1.
2. Xakamaynta biyaha. Biyaha ku jira bacriminta wax soo saarka dhabta ah guud ahaan waxaa lagu xakameeyaa 50% -65%.
3. Xakamaynta hawo-isugeynta. Siinta ogsijiintu waa qodob muhiim u ah guusha compost. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in ogsijiinta ku jirta raso ay ku habboon tahay 8% ~ 18%.
4. Xakamaynta heerkulka. Heerkulku waa cunsur muhiim ah oo saamaynaya waxqabadka noolaha compost. Halsano heerkulka sare badanaa waa inta udhaxeysa 50-65 ° C.
5. Xakamaynta PH. PH waa cunsur muhiim ah oo saameeya koritaanka noolaha. PH-da ugu fiican waa inay ahaataa 6-9.
6. Xakamaynta urta. Waqtigaan la joogo, in yar oo noole ah ayaa loo isticmaalaa in jirka lagu nadiifiyo.
Faa'iidooyinka Double Mashiinka Composting Turner Machine
(1) Jeexitaanka halsano ee xaqiijin kara shaqada hal mashiin oo leh jeexdin badan ayaa si joogto ah loo sii deyn karaa ama dufcado.
(2) Waxsoosaar halsano oo sarreeya, hawlgal xasilloon, xoog leh oo waara, leexo labis.
(3) Ku habboon halsano aerobic waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo qolalka halsano ee qoraxda iyo wareejiyayaasha.
Double Ku marooji Composting Turner Machine Video Display
Xulka Labaad Iskuduwaha Iskuduwaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Qoto dheer ee Groove
Hore: Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada
Xiga: Taangiga Gawaarida Gaaban